Soft Flow Indwangu imbobo - China Qingdao Aedis Indwangu imbobo
MICROFLOW emoyeni uma liqhathaniswa nezibani kuthiwa enziwe ngendwangu permeable izakhi ukuze emazingeni athile porosity. Izigidi ezincane zomoya Jets akhishwe ngokusebenzisa Indwangu diffuser.
Ngokuvamile, MICROFLOW uma liqhathaniswa nezibani asetshenziselwa ukuba azixoshe kunokuba uhlanganise emoyeni. Ukuze afeze emoyeni ukufuduka le Jets emoyeni kumele ekubhebhetselisa ngokushesha okukhulu. Lapho POWERFLOW emoyeni jet kungathatha 20 'noma ngaphezulu ekubhebhetselisa ngokuphelele, encanyana MICROFLOW emoyeni Jets ekubhebhetselisa ngaphakathi 6 "we ebusweni diffuser.
Ngoba velocity we ezincane zomoya Jets siyehla ngokushesha okukhulu, ngokuvamile emoyeni ivame ukwehlela njengoba mass azixoshe emoyeni emazingeni aphansi Igumbi.
MICROFLOW emoyeni uma liqhathaniswa nezibani asetshenziswa ngokuyinhloko izicelo ezikhethekile ezintathu. Njengoba azixoshe kunokuba uhlanganise emoyeni, zingabantu esebenza kahle kakhulu ngesikhathi ekususeni umoya ongcolile. Okwesibili, MICROFLOW uma liqhathaniswa nezibani abangaba njengendlela lemifanekiso zifakwe ezindaweni ezizwelayo, ezifana okulungisa ukudla, kodwa ke kuzodinga budedengu njalo. Ngo eduze kakhulu, amakota ebucayi, MICROFLOW angabakhulula emoyeni obandayo ngaphandle kwekwenta tinhlaka tekucala.
I izici eziyinhloko e MICROFLOW emoyeni diffuser bomklamo Indwangu porosity, ingcindezi static, futhi diffuser ubude diffuser ubukhulu. Kubalulekile usebenzise isisefo samanzi ngokuhlanganyela MICROFLOW uma liqhathaniswa nezibani ukunciphisa budedengu. Izincomo Isicelo zihlanganisa; Ihhovisi isikhala, ezokuxhumana, ukucutshungulwa Ukudla, Classroom, amakamelo Clean, futhi ukuhlolwa labs.
Ikhebula Flush Rail Halo Ukumiswa HD Rail
Classroom Hlanza zamagumbi Food Processing yehhovisi
Air Jet Imigudu Condensate sokukhipha Dweba Izintambo Indwangu damper nokufaka Yangaphakathi Ukuphela Cap Izimpawu Uziphu futhi Velcro Connections
Polyester kuyinto grade premium Indwangu uncoated. It has a lokushisa ncibilika 350 ° F no kungenziwa zihlanzekile ezigabeni ezincane. Polyester umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi futhi ihlangabezana ASTM E-84 Class A.
a) Ikhebula: Amaphaphu ikhebula ukhetho ukonga kakhulu. Iyatholakala kuzo zonke diameters, Single ikhebula-30 "ububanzi futhi kabili-48" ububanzi futhi kathathu phezulu. Snaphooks kuthiwa esilinganayo 36 "izikhungo futhi iyatholakala plastic, insimbi engagqwali. Ikhebula itholakala lashukumisa, Insimbi engagqwali, futhi vinyl camera. Uhlelo siqukethe ikhebula (3/16 "ububanzi), turnbuckle, amabhawodi kwensimbi futhi ikhebula izibopho.
b) I-halo Ukumiswa: okusha Halo Amaphaphu ukumiswa kohlelo (HTS) kunikeza ukubukeka FlowCon yakho uhlelo diffuser ukuba ulele lapho uhlelo emoyeni handling ivaliwe. Lolu khetho ingasetshenziswa nge elula umugqa owodwa ikhebula ukumiswa noma olulodwa HD wesitimela ukugcina diffuser FlowCon looking ulele ngaphandle Ukuhamba. Kunomkhawulo kusuka 10 "ukuba 36" ububanzi, le ndlela ephelele izicelo lapho deflated diffuser isandla phansi kuyinkinga. Izigaba kalula sizovalwa wageza kungekho zabasebenzi eyengeziwe. Izingxenye zihlanganisa ejwayelekile umugqa owodwa ukungezwani ikhebula noma HD yethu wesitimela uhlelo olulodwa.
c) HD Rail: okusha HD anodized aluminium wesitimela yethu uhlelo premium wesitimela. Echachambile ukubukeka bushelelezi ngoba FlowCon Indwangu diffuser yethu uhlelo. Iyatholakala kuzo zonke diameters, ujantshi Single-30 "ububanzi futhi kabili-48" ububanzi futhi kathathu phezulu. Awama-Glider kuthiwa esilinganayo 36 "izikhungo futhi iyatholakala plastic. Uhlelo siqukethe HD wesitimela, ujantshi izisekelo, couplers, futhi izisekelo mpo (isivinini link). Ububanzi egoba ayatholakala ukuhlangabezana indololwane engaba.
d) Rail Flush: Flush anodized aluminium wesitimela ingasetshenziswa yezinhlelo zokusebenza FlowCon diffuser uhlelo kumele kube eduze ophahleni. Ujantshi Flush has ezizofakwa ophahleni oluyisicaba noma T-Bar uhlelo. Flush entabeni wesitimela iklanyelwe ukusekela yethu 'D' imbobo uma liqhathaniswa nezibani. D imbobo uma liqhathaniswa nezibani asetshenziswa lapho uphahla ukuphakama kuyinto ekhathazayo. A double Flush wesitimela Uhlelo adingekayo ukuze asekele diffuser le 'D' imbobo. Osayizi kusuka 6 "18" engaba (12 "ukuba 36" ububanzi) ayatholakala. Uhlelo siqukethe Flush entabeni rail ekupheleni ucezu. Ububanzi egoba ayatholakala.
Previous: Micro Flow Indwangu imbobo
Olandelayo: Amandla Flow Indwangu imbobo
Indwangu Soft imbobo
OEM Design Soft imbobo
Soft amapayipi omoya
Soft Air ababephelezela